Francisco Madeira:Wajiga Labaad ee Bixitaan Ciidamadda AMISOM waa uu Bilaabanaya”, | Booqasho.com News Online - Tabiyaha Wararka Xaqiiqda Ah
Home Wararka Maanta Francisco Madeira:Wajiga Labaad ee Bixitaan Ciidamadda AMISOM waa uu Bilaabanaya”,
Madaxa Midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliya u qaabilsan Ambassador Francisco Madeira ayaa waxa uu sheegay in bilowga sanadka 2018 wajigii labaad ee ciidamada AMISOM in ay ka bixi doonaan gudaha dalka soomaaliya.
Waxa uu sheegay in ciidamada dowlada federalka Soomaaliya ay kala wareegi doonaan Amniga dalka iyadoo qorshaha uu yahay in ka bixitaanka AMISOM uu dhamaado sanada 2020.
Mr Madeira ayaa sheegay in ciidamada qaranka dalka Soomaaliya loo tababaray sidii ay dalka u ilaalin lahaayeen amnigiisa waxaana uu xusay in sanadka soo socda 1,000 askari oo ka tirsan howlgalka AMISOM in ay soomaaliya ka bixi doonaan.
Inta lagu guda jiro xiliga kala guurka AMISOM iyo Ciidamada dowlada ayaa qaadi doono howlgalo ka dhan ah Xarakada Al-shabaab waxaana Franciso Madera uu xusay in dib loo furi doono isu socodka wadooyinka waaweyn ee xiran si shacabku ay u isticmaalaan.
9 December Ciidamadii ugu horreeyay ee ka mid ahaa howlgalka AMISOM ayaa ka baxay Soomaaliya iyadoo la raacayo xeerka ka bixitaanka qaramada midoobay ay horay u soo jeedisay.
Sanadaan 2017-ka waxaa markii ugu horeysay magalada muqdisho laga howlgeliyay ciidamada nabad ilaalinta midowga Africa ee AMISOM si ay ula dagaalamaan dagaalyahanada Xarakada Al shaaab.
Previous articleMaxaa ka jira in Duqii hore ee Muqdisho loo magacaabayo Taliyaha cusub ee Nabad Sugida Qaranka?
Next articleXiliga la bilaabayo wejiga 1aad ee Mashaariicda Qatar ka fulineyso Somalia oo la shaaciyey